Ahoana ny famahanana alika kely Doberman | Alika Manerantany
Ny fanomezana sakafo ny volom-baintsika dia iray amin'ireo lahasa lehibe indrindra tokony hataontsika mandritra ny fotoana rehetra iasantsika. Fa ny famahanana azy dia mihoatra ny famenoana sakafo ny lovany sy ny fanolorana azy ho azy: ny alika kely dia tokony hianatra hiandry mangina Ary aza matahotra, raha tsy izany dia mety hipoitra ny olana rehefa lehibe izy.
Ho fanampin'izay, tokony homena anao ny habetsany mety, tsy mihoatra ary tsy latsa-danja, mba hitahirizanao ny lanjanao mety. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, andao hojerentsika ny fomba famahanana alika kely doberman.
Ny zavatra voalohany tokony ho fantatsika dia izany ho an'ny fampandrosoana sy ny fitomboana tsara dia tsy maintsy omena anao sakafo matanjakaAza manana serealy na inona na inona karazana satria sakafo mety hiteraka tsy fihinanan-kanina izany. Noho izany, azonay omena anao Barf (miaraka amin'ny fanarahan-dia ny mpitsabo sakafo kaninina), Yum Diet ho an'ny alika, Summum na sakafo toy ny Acana, Orijen, Taste of the Wild, Applaws na mitovy amin'izany izay hikarakara ny vatanao.
Ny habetsaky ny sakafo izay tsy maintsy omentsika dia aseho amin'ny fitoeran'ny vokatra. Na izany na tsy izany, hanomezana hevitra antsika Tokony hanome azy 500 grama eo ho eo intelo isan'andro hatramin'ny dimy volana izahay, ary 300 grama eo ho eo amin'ny enina roa manomboka amin'ny enim-bolana..
Raha miresaka momba ny fotoana isika dia tsy maintsy mamela ny rano ho eo am-pelatananao mandritra ny andro, fa tsy maintsy omanina ny sakafo, angataho izy hipetraka ary avelao ho eo amin'ny tany ny lovia hohaniny. Raha mbola manao izy dia mila avelanao irery izy. Tsy misy te hanelingelina azy eo am-pihinanana, mainka fa ny fanesorana ny takelaka rehefa mbola tsy vita. Raha vita izany dia izay ho tratra dia ny miaro ny sakafony ilay biby, zavatra iray, etsy ankilany, no zony.
Rehefa tapitra ny sakafo dia esorinay ny vilia baolina, ary raha tianay dia homenay safosafo ianao na, tsara kokoa aza, dia an-tongotra mba hahafahanao mianatra manala ny tenanao any ivelany.
Ka ny fotoam-pisakafoanana dia ho iray amin'ireo andrasan'ny alika kely indrindra 🙂.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fahano alika sy alika kely » Ahoana ny famahanana alika kely doberman
Ahoana ny fomba hanomezana ny pilina amin'ny alika
Ahoana no hahalalana ny taonan'ny alikao araka ny nifiny